Ulawulo loMgangatho - Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.
Ikhaya > Ulawulo lwemeko
UShimmge ukhetha izinto eziphambili ukuqinisekisa umgangatho ophezulu wamapompo amanzi; iyakwamkela amaziko angamazwe ahloniphekileyo asemaphandleni nakwikhaya lokuqala ukuqinisekisa ukuba uzinzo kunye nokuthembeka komshini wonke; Uchitha utyalo-mali obuninzi ukuvelisa izixhobo eziphambili zokuqhubela izixhobo kunye nokusebenzisa izixhobo zetekisi yehlabathi, ngaloo ndlela ukuqinisekisa ukuchaneka okuphezulu kokusebenza kwamacandelo kunye nokwenza inkqubo yangaphakathi yamanzi ipompo ngakumbi kwaye iluthembeke; kwaye unayo iisethi ezininzi zezixhobo zokucoca ngokuzenzekelayo ukwenzela ukuba uqulunqe izinto ezizenzekelayo kunye neengqiqo.
Uhlolo oluPhezulu lweMpilo
Inkampani iye yamisela iibhentshini zokuhlola ezisibhozo zokusebenza ukuze isampulule iimveliso kumgca wokuvelisa kwaye zihlole izinto zokuhlola ezihambelana nemilinganiselo yokwamkelwa kokuhlolwa komkhiqizo ogqityiweyo, ukwenzela ukuba kuqinisekiswe ukuba ukusebenza kweemveliso ezigqityiweyo zihlangabezana neemfuno zomgangatho wesizwe. Ukongezelela, inkampani iye yamisela amabhentshini okuhlola okuthembekileyo asixhenxe, kwaye iqulunqa i & quot; I-Pump Yokuqinisekiswa koVavanyo loVavanyo loVavanyo & quot; ngokwemiqathango kazwelonke. Ngaphantsi kweemeko zokusebenza zabathengi, ixesha lokusebenza elingenabandezelo / ixesha elide lokusebenza ngaphambi kokungaphumeleli kokuqala kwemveliso ivavanywa, kwaye umngcipheko wokuthembeka komgangatho wemveliso uhlolwe. Ubunobumba obubuthathaka ekuvelweni nasekuveleni kubonakaliswe kwinkqubo yokuvavanya, kwaye iimfuno ezifanelekileyo zokukhula ngokuthembeka zihanjiswa phambili.